Deg deg: Xildhibaanada BF oo codka kalsoonida siiyey Ra'iisul wasaaraha cusub | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Deg deg: Xildhibaanada BF oo codka kalsoonida siiyey Ra’iisul wasaaraha cusub
Deg deg: Xildhibaanada BF oo codka kalsoonida siiyey Ra’iisul wasaaraha cusub
Xildhibaanada Golaha Shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa goor dhow si aqlabiyad leh ku meel mariyey Ra’iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya, Mudane Maxamed Xuseen Rooble.
Ugu horreyn Madaxweynaha Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullahi Maxamed (Farmaajo) oo khudbad kooban ka jeediyey kulanka ayaa ka dalbaday xildhibaanada in codka kalsoonida ah ay siiyaan Ra’iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya.
Kadib waxaa la guda galay kalsooni siinta Ra’iisul wasaaraha oo isna hadal hadal kooban ka jeediyey munaasabadda, wuxuuna sheegay inuu wax ka qaban doono amniga doorashada iyo dhaqaalaha, isagoona ka codsaday xildhibaanada inay codka siiyaan.
Intaasi kadib waxaa bilaabatay codeynta oo aheyd gacan taag, waxaana Ra’iisul wasaaraha codka siiyey dhammaan xildhibaanada fadhiga soo xaadiray oo gaarayey illaa 215 mudane, sida uu ku dhawaaqay natiijada guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Ugu dambeyn Ra’iisul wasaaraha cusub ayaa xil-kiisa loo dhaariyey, iyadoona uu madasha ku sugnaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka.
Maqaal horeQaramada Midoobay war cusub ka soo saartay xaaladda Soomaaliya
Maqaal XigaMuxuu Ra’iisul wasaaraha cusub ka codsaday BF Soomaaliya?